Edezighị ngwa ngwa: Ngalaba Steeti US na iyi egwu Russia Russia na mwakpo UAE
Location: Mbido » Ịdee » Akụkọ Ọchịchị » Edezighị ngwa ngwa: Ngalaba Steeti US na iyi egwu Russia Russia na mwakpo UAE
114 min gụọ
N'ihi ọdịdị dị njọ nke mwakpo ndị Russia nwere ike ịwakpo Ukraine, eTurboNews na-enye transcript raw nke ogbako ndị nta akụkọ kwubiri na Ngalaba Steeti US
Nkwupụta nta akụkọ nke Ngalaba Steeti US, Mọnde 24 Jenụwarị 2022,
Ụdị Raw edeghị edezi
Ned Price, ọnụ na-ekwuchitere ngalaba
Washington DC, 2:39 ehihie EST 24 Jan 2022
Ọnụ ego MR: Ehihie ọma. Obi ụtọ ụbọchị Mọnde. Ọ dị mma ịhụ onye ọ bụla. Naanị otu ihe dị n'elu ma anyị ga-eburu ajụjụ gị.
United States na-akatọ mwakpo abalị ndị Houthis mere na United Arab Emirates na Saudi Arabia, nke butere mmerụ ahụ ndị nkịtị na Saudi Arabia ma sorokwa mwakpo ndị Houthi yiri nke ahụ n'izu gara aga nke gburu ndị nkịtị atọ na Abu Dhabi. Anyị na-ekwughachi nkwa anyị iji nyere aka wusie ike nchebe nke ndị mmekọ Saudi na Emirati anyị.
Mwakpo ndị a na UAE na Saudi Arabia, yana agha ikuku na nso nso a na Yemen nke gburu ndị nkịtị, na-anọchite anya mmụba na-enye nsogbu nke na-eme ka nhụjuanya nke ndị Yemen dịkwuo njọ.
Anyị na-akpọ ndị niile na-ese okwu ka ha kwenye na nkwụsị ọkụ, rube isi n'ọrụ ha n'okpuru iwu mba ụwa, gụnyere ndị metụtara nchebe nke ndị nkịtị niile, ma sonye n'ụzọ zuru ezu na usoro udo nke UN na-eduga.
Ndị Yemen chọrọ ngwa ngwa ngwọta diplomatic maka esemokwu ahụ, ngwọta diplomatic nke na-eme ka ndụ ha dịkwuo mma ma na-enye ha ohere ijikọta ọnụ kpebie ọdịnihu ha.
Site na nke ahụ, enwere m obi ụtọ ịtụgharị uche na ajụjụ gị. Ee? Ọfọn, m ga-amalite azụ ebe ahụ, dị ka m kwere ná nkwa. Biko.
AJỤJỤ: (Anaghị ekwu okwu) n'okwu a, yabụ -
Ọnụ ego MR: Ọ dị mma. Akwa.
AJỤJỤ: Were m, biko. Mwakpo ndị Houthis taa wakporo UAE bụ nke iri na atọ n'ime ụbọchị iri gara aga. Ya mere, mbuso agha ndị a emelitere n'oge na-adịbeghị anya. Anyị ga-ahụ ugbu a otu ngwa ngwa na usoro nlebara anya nke Biden - site na nchịkwa iji tinye ndị Houthis na mwakpo ndị na-eyi ọha egwu?
Ọnụ ego MR: To – ndo, I —
AJỤJỤ: Iji debanye aha ha azụ na mwakpo ndị na-eyi ọha egwu?
Ọnụ ego MR: Oh, idepụta ha.
AJỤJỤ: Yabụ na a ga-ebute ngwa ngwa a n'otu ngwa ngwa na usoro nlebara anya nke gọọmentị Biden na-elekọta maka iweghachi ha azụ na mwakpo ndị na-eyi ọha egwu?
Ọnụ ego MR: Yabụ ajụjụ gị bụ maka ọnọdụ ndị Houthis na enwere ike imegharị ya. Ọ dị mma, dịka ị maara, Onye isi ala gwara mba ahụ okwu n'izu gara aga mgbe ọ na-agwa mba ahụ okwu na nnọkọ mgbasa ozi ya na Wednesde gara aga. O kwuru na a na-atụle ajụjụ maka nrụgharị ahụ, nwere ike imegharị Ansarallah, aha maka mmegharị Houthi. Ya mere, enweghị m ike ikwurịta usoro ọ bụla nwere ike ịtụle.
Nke a bụ ihe m ga-ekwu, n'agbanyeghị. Anyị ga-aga n'ihu na-arụkọ ọrụ na ndị mmekọ anyị na mpaghara, gụnyere Saudi Arabia na UAE, iji nyere ha aka ịgbachitere ọgụ megide mwakpo Houthi a jọgburu onwe ya. Dị ka data ikpeazụ m hụrụ gosiri, site n'enyemaka nke United States, Alaeze Saudi Arabia enwewo ike igbochi ihe dị ka pasent 90 nke mwakpo ndị a na-abata na Yemen, site na Houthis. N'ezie, ebumnuche anyị, ebumnuche mkpokọta anyị, ga-enweta - iji nweta nke ahụ ka ọ bụrụ 100%. Ma anyị ka nọ - anyị ga-anọgide na-akwado ndị mmekọ anyị na nke a.
Anyị bụkwa, ma anyị nwere, na-aga n'ihu na-ejide ndị isi Houthi maka omume ọjọọ a. Anyị enyela mmachi na ndị isi isi na aha ndị isi isi n'ọnwa ndị na-adịbeghị anya. Anyị ga-aga n'ihu na-akpọku ngwa ọrụ niile kwesịrị ekwesị na ngwa ngwa anyị ka ha jide Houthis ndị a, ndị isi Houthi ndị ahụ kpatara mwakpo ndị a. Anyị agaghị alaghachi azụ n'ịkpọpụta ndị isi Houthi na ụlọ ọrụ ndị na-etinye aka na mwakpo ndị agha nke na-eyi ndị nkịtị egwu na nkwụsi ike mpaghara, na-eme ka esemokwu ahụ dịgide, ime ihe ndị ruuru mmadụ, ma ọ bụ imebi iwu mba ụwa, ma ọ bụ na-eme ka nsogbu ndị mmadụ na-enwewanye njọ site na - dị ka ọtụtụ akụkọ si kwuo. , bụ nsogbu mmadụ kacha njọ na ihu ụwa.
Ma nke a bụ echiche dị mgbagwoju anya, anyị na-ekwukwa okwu a n'oge mbụ nke nchịkwa ahụ, ihe dị ka otu afọ gara aga ugbu a, mgbe anyị na-ekwu maka mkpebi mbụ vis-à-vis Houthis n'ihi na n'ime mkpebi ahụ na ịbịakwute. Mkpebi mbụ ahụ, anyị gere ọtụtụ ndị metụtara ya ntị. Anyị nụrụ ịdọ aka ná ntị sitere na UN. Anyị gere ntị na nchegbu sitere n'aka otu ndị na-elekọta mmadụ. Anyị na-ege ntị ndị òtù Congress nke bipartisan bụ ndị megidere mkpebi nchịkwa ikpeazụ nke ịkọwa Houthis dị ka òtù ndị na-eyi ọha egwu si mba ọzọ, mgbe ahụ STDT n'ihi na nke mbụ, mkpebi ahụ siri ike nwere ike inwe mmetụta na ikike anyị iji nyefee na inye ihe dị mkpa. enyemaka mmadụ nye ụmụ amaala Yemen.
Ọ nwekwara ike imetụta ịnweta ngwa ahịa ndị bụ isi dị ka nri na mmanụ ụgbọala. Ya mere, anyị nụrụ nchegbu ndị ahụ n'olu dara ụda na nke doro anya, ma anyị maara na ihe dị ka pasent 90 nke ngwaahịa ndị dị mkpa na Yemen bụ ndị ahịa nkeonwe na-ebubata. Na n'ihi oke ịkpachara anya, ndị na-eweta ihe ndị a - ndị a na-ebubata na ụlọ ọrụ ego nwere ike ịkwụsị ọrụ ahụ, nke dị mkpa maka mkpa enyemaka nke ndị Yemen.
Ya mere, anyị nụrụ nchegbu ndị ahụ n'olu dara ụda. Anyị na-eleba anya na nzaghachi kwesịrị ekwesị, ma ihe anyị ga-aga n'ihu na-eme, enweghị ajụjụ banyere ya, bụ ịkwado UAE, guzoro na Saudi Arabia, na ijide ndị isi Houthi na-akpata maka mwakpo ndị na-eyi ọha egwu.
AJỤJỤ: Ee, Ned, naanị nsonazụ, isi ihe abụọ ọzọ na okwu a: USA kwukwara na nkwupụta ndị gara aga - sitere na ngalaba steeti m kwenyere, yana White House - na ọ ga-akwado UAE na ịgbachitere ókèala ya. Yabụ kedu ka nkwado a ga-esi pụta n'okwu bara uru? Nke ahụ bụ otu. Abụọ, US ọ ga-enye aka na-amachibido ịgbasa ngwa agha na nkwado ego nye ndị Houthis, n'ihi na Iran na-akwado ma na-akwado ha?
Ọnụ ego MR: Yabụ na ajụjụ mbụ gị, anyị na ndị mmekọ Emirati na-arụkọ ọrụ nke ukwuu, dịka anyị na ndị mmekọ Saudi anyị na-eme, iji nye ha ihe ha chọrọ iji nyere aka chebe onwe ha pụọ ​​​​na ụdị ọgụ a. Anyị ga-anọgide na-eme nke ahụ. Anyị ga na-eso ha na-arụkọ ọrụ n'ụzọ dị iche iche iji nyere ha aka wusie onwe ha ike megide mwakpo ndị a.
Na ajụjụ gị nke abụọ gbasara -
AJỤJỤ: Ee. US ọ ga-enye aka na-amachibido ịgbasa ngwa agha na nkwado ego nye ndị Houthis, n'ihi na Iran na-akwado ha?
Ọnụ ego MR: Kpamkpam. Ma anyị agbasiwo mbọ ike na nke ahụ, ọ bụghị naanị na nchịkwa a kama n'ọchịchị ndị na-esote. Ị nụwo ka ndị mmekọ anyị na Ngalaba Nchebe na-ekwu okwu maka ọdịdọ n'oké osimiri, dịka ọmụmaatụ, ngwa agha ejirila Yemen na ndị Houthis. Ị hụla ka anyị na-enwu ọkụ na ọkwa nkwado nke Iran na ndị Iran na-akwado na-enye ndị Houthis. Ị nụla ka anyị na-ekwu maka ọrụ na-emebi emebi nke Iran na ndị nnọchiteanya ya na-arụ n'ofe mpaghara ahụ, nke ahụ gụnyere na Yemen, na nke ahụ gụnyere nkwado Iran maka mmegharị Houthi na Yemen.
AJỤJỤ: Ajụjụ bụ: Ị ga-akwụsị ịgba ọsọ nke ogwe aka n'anụ ahụ? M pụtara, ị na-aga (anaudible) ike nke ogwe aka? Echere m, echere m na nke ahụ bụ isi okwu a.
Ọnụ ego MR: Ọfọn, na azịza m na nke ahụ bụ ee, anyị ga-aga n'ihu na-eme ihe niile anyị nwere ike ime iji kwụsị ọsọ agha, enyemaka, nke -
AJỤJỤ: Yabụ na anyị nwere ike ịhụ, dị ka, mbuso agha ikuku ndị America kwụsịtụ ọsọ nke ngwa agha?
Ọnụ ego MR: Ọ dị m nwute?
AJỤJỤ: O yikarịrị ka anyị ga-ahụ mwakpo e bu n'obi kwụsị ịgba ọsọ nke ndị agha America?
Ọnụ ego MR: Ị hụla ihe na-aga n'ihu site n'aka akụkụ nke nchịkwa a na ndị ọchịchị gara aga iji kwụsị ngwa agha, iji kwụsị ibubata ndị Houthis, na nke ahụ gụnyere n'ezie ihe ndị Iran nyere.
AJỤJỤ: Ned, na Russia. Yabụ na a ga-enwe -
AJỤJỤ: - oku na ndị Europe gbasara (adịghị anabata) -
Ọnụ ego MR: Ọfọn, ndo, ka anyị mechie - ka anyị mechie Yemen, mgbe ahụ anyị ga-abịa na Russia.
AJỤJỤ: Dịkwa mma.
AJỤJỤ: Ndị Houthis ekwuola na ha na-agba mbọ n'ọdụ ụgbọ elu US dị na UAE ụnyahụ, ndị agha Amerịka ekwuola na ha gbara ndị Patriots gbachiri ogbunigwe ha. A ga-enwe mmeghachi omume US ọ bụla na Houthis, ọkachasị na ha na-eche ndị agha US na UAE?
Ọnụ ego MR: Anyị ga-aga n'ihu na-ejide ndị Houthi na-aza ajụjụ maka mwakpo ndị na-eyi ọha egwu. Anyị ga-eme nke ahụ n'ụzọ dị iche iche. Anyị ejirila ọtụtụ ngwaọrụ ugbua, ana m eche na ị ga-ahụ ka anyị na-aga n'ihu na-eme nke ahụ n'ụbọchị na izu ndị dị n'ihu.
AJỤJỤ: Otu ụzọ na Yemen.
Ọnụ ego MR: N'ezie.
AJỤJỤ: US eruola nkwubi okwu ọ bụla dị iche gbasara ihe mmetụta na nnyefe enyemaka ga-abụ na nhọpụta? Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, gịnị kpatara na-eji echiche a?
Ọnụ ego MR: Ọfọn, anyị na ụfọdụ n'ime ndị ahụ metụtara m kwuru na mbụ na-akpakọrịta ka ha gaa n'ihu na-anụ echiche ha, iji nweta echiche ha. N'ezie ụfọdụ nchegbu anyị nụrụ ihe dị ka otu afọ gara aga ka ga-adabara. Ajụjụ a bụ ma anyị nwere ike - ma nrụgharị ga-abụ - ga-abụ maka ọdịmma nke United States, ọ ga-abụ maka ọdịmma anyị, ọ ga-abụ maka nchebe nke ndị mmekọ anyị na mpaghara ahụ, ọ ga-abụkwa maka ọdịmma anyị. anyị nwere ịhụ njedebe nke esemokwu na ihe mberede enyemaka mmadụ na Yemen.
Yabụ na ọ siri ike - ọ bụ ihe siri ike nke anyị na-atụle, mana dịka Onye isi ala kwuru, anyị na-atụle - anyị na-atụle mkpebi ahụ.
Kedu ihe ọzọ na Yemen? Humeyra.
AJỤJỤ: Ọ dị mma. Were abụọ. Na Russia, yabụ a ga-enwe oku na ndị Europe n'ehihie a na Onye isi ala Biden. Anọ m na-eche - a jụrụ nke a na nkọwa okwu White House, mana ọ bụrụ na ị nwere ike ime ka ìhè ntakịrị na ihe nchịkwa na-atụ anya inweta site na oku a. Anyị anụwokwa Onye isi ala Biden n'izu gara aga na-ekwupụta n'ihu ọha na mgbawa dị n'ime NATO Alliance yana ndị Europe ka esi eme ya - otu esi emeghachi omume. Enweela ọganihu ọ bụla kemgbe ahụ na ndị Europe? Ị nọ nso ịnọ n'otu ibe? Ma ọ dị ihe ọ bụla mere anyị ga-eji na-atụ anya na mgbe oku a gachara, ị ga-adịkwu n'otu ibe maka otu esi emeghachi omume maka obere mbanye, ma ọ bụ nnukwu mbanye, n'agbanyeghị nke ahụ?
Ọnụ ego MR: Ọ dị mma. Humeyra, dịka ị maara, anyị nọ na Europe n'izu gara aga. Anyị nọ na Kiev. Anyị wee gaa Berlin, ebe na mgbakwunye na nzukọ anyị na ndị Germany jikọrọ aka, odeakwụkwọ nwere ohere izute ndị a na-akpọ European Quad. Tupu nke ahụ, anyị nọ na Europe n'ọnwa gara aga ebe anyị nwere ohere izute NATO Allies, na OSCE. N'ime izu ndị na-emekọrịta ihe, odeakwụkwọ, onye osote onye odeakwụkwọ, onye na-ahụ maka Ọchịchị na-ahụ maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ bụghị ikwu maka President na National Security Advisor na ọtụtụ ndị ọzọ nọ na ekwentị mgbe niile na ndị mmekọ na ndị mmekọ iji kwurịta nke a na Russia na-eme ihe ike na ndị ọzọ. nzaghachi.
Achọrọ m ịweta esemokwu na mmalite nke ajụjụ gị n'ihi na n'ime ọrụ ndị ahụ niile - ntinye aka nke mmadụ, mkparịta ụka, nnọkọ vidiyo - na nke ọ bụla n'ime njikọ ndị ahụ, anyị anụla, ma gị onwe gị anụwokwa. site na ọ bụghị naanị anyị kama site na ndị mmekọ na ndị mmekọ Europe, ndị mmekọ n'otu n'otu, NATO, OSCE, G7, European Union, European Council - ị nụla otu ozi ahụ: Ọ bụrụ na ndị agha Russia ọ bụla gafere n'ókè ahụ, nke ahụ bụ ọhụrụ. mbuso agha; a ga-ezute ya na nzaghachi ngwa ngwa, siri ike na nke jikọrọ ọnụ n'akụkụ nke United States na n'akụkụ nke ndị anyị na ha jikọrọ aka.
Yabụ na enweghị mgbagha gbasara nke ahụ. Enweghị mgbagwoju anya. Ọ dịghị ìhè ehihie. Anyị maara nke ahụ. Na ihe dị mkpa, Russian Federation maara nke ahụ.
AJỤJỤ: Right. Yabụ na - dị mma, daalụ. Ọ nwere ntakịrị ìhè ehihie, mana agaghị m anụ nke ahụ ogologo oge. A bụ m - Ana m eche, ị nwere ike mee ka ị nweta ntakịrị ọkụ maka ihe unu chọrọ imezu na nzụkọ a? Ma mgbe ahụ, m ga-aga n'ihu na-abụghị akwụkwọ.
Ọnụ ego MR: Ọfọn, ka m laghachi n'okwu gị na-enweghị isi - ma eleghị anya ọ bụ naanị ka e bu n'obi ka ọ bụrụ nkwuwa okwu, mana enweghị m ike iguzogide.
AJỤJỤ: Mba, ọ bụ naanị nke ahụ, m na-ekwu, Onye isi ala kwuru na e nwere echiche dị iche, nke a bụkwa ihe anyị na-enwe. Anyị na-ahụ ihe -
Ọnụ ego MR: Ihe ị nụrụ n'ọnụ Onye isi ala, ihe ị nụrụ n'aka odeakwụkwọ, ihe ị nụrụ n'aka onye ndụmọdụ nchekwa mba, ihe ị nụrụ n'ọnụ ndị ọzọ bụ na ọ bụrụ na ndị Russia na-awakpo Ukraine, a ga-enwe nzaghachi. Ọ ga-adị ngwa; ọ ga-esi ike. N'ihe banyere mbubata, ọ ga-abụ nke a na-enwetụbeghị ụdị ya n'ihe gbasara usoro anyị dị njikere ime.
Ma ị nwere ike ịsị na e nwere ìhè ehihie, ma enwere m olileanya na ị ga-eleba anya ma gee ntị n'okwu ndị sitere na isi obodo Europe, nkwupụta sitere na NATO, site na OSCE, site na G7, site na European Commission. site na United States, site na ndị enyi anyị guzo n'akụkụ Secretary Blinken, ma nke ahụ bụ Minista mba ọzọ Baerbock, ma ọ bụ ndị mmekọ na ndị mmekọ ndị ọzọ anyị zutere na izu ndị na-adịbeghị anya na n'ime ọnwa abụọ gara aga.
Ya mere, mmadụ nwere ike ikwu na e nwere ìhè ehihie; ma n'ezie, ọ bụrụ na i leba anya n'olu na ihe ndị pụtara ìhè n'ime ndekọ ọha, echere m na nke ahụ ga-emebi nkwupụta ahụ.
AJỤJỤ: Unu ga-ezipụ akwụkwọ a na-abụghị akwụkwọ, dịka, izu a? Ị nwere ike ikwu ntakịrị banyere nkà na ụzụ nke ahụ, ihe ọ ga-agụnye?
Ọnụ ego MR: Yabụ dị ka odeakwụkwọ kwuru na Fraịde, anyị na-atụ anya na anyị ga-enwe ike izipu nzaghachi ederede n'izu a. Tupu anyị emee nke ahụ, na ihe anyị na-eme ugbu a - nke a na-abanye na ajụjụ mbụ gị gbasara njikọ aka na ndị mmekọ Europe na ndị mmekọ anyị - ihe anyị na-eme, dịka ị maara na dịka ị hụworo, bụ nhazi oge niile na nhazi. Ndụmọdụ anyị na ndị mmekọ anyị na ndị mmekọ n'akụkụ nke ọzọ nke Atlantic.
Anyị na-eme nke a n'ihe banyere nzaghachi a na-enwetụbeghị ụdị ya, ngwa ngwa, siri ike, siri ike, nke dị n'otu nke Russia ga-atachi obi ma ọ bụrụ na ọ ga-emekwu ihe ike, ma anyị na-eme ya n'ọnọdụ nke nzaghachi ederede nke anyị ga-enye. na Russian Federation, dị nnọọ ka anyị na-eme ya na nzaghachi na ihe anyị na-ekwu banyere ebe nwere ike inwe ọganihu na-emeghachi omume nzọụkwụ nke nwere ike ime ka anyị mkpokọta nchekwa. Site na nchekwa mkpokọta, m na-ekwu maka nchekwa nke obodo transatlantic mana enwere ike ileba anya ụfọdụ nchegbu ndị Russia webatara.
Ya mere, ka anyị na-atụle nzọụkwụ ọzọ na ntinye aka anyị - na nke ahụ bụ, n'eziokwu, ịnye nzaghachi ederede na Russian Federation - anyị na-ekerịta echiche ndị ahụ na anyị - anyị ejiriwo ndị enyi Europe na ndị mmekọ anyị kerịta echiche ndị ahụ. Anyị na-anabata nzaghachi ha. Anyị na-etinye nzaghachi ahụ na nzaghachi ederede. Ma mgbe anyị dị njikere ibufe ya, anyị ga-eme ya. Atụrụ m anya na nke ahụ ga-abụ n'izu a.
AJỤJỤ: Ned, yabụ ị sị na ọ nweghị ìhè ehihie na nzaghachi, anyị ga-ahụ nke ahụ. Mana o doro anya - ma ọ bụ ọha n'ebe ahụ - ìhè ehihie na njirimara nke iyi egwu ahụ. Ndị Europe, French, na ndị ọzọ, Mr. Borrell, yiri ka ọ na-ewe ezigbo iwe site na ụda egwu dị na Washington banyere ihe iyi egwu dị nso, na ha na-na - ha na-ekwu na anyị ekwesịghị inwe nhụjuanya ụjọ, anyị nwere. iji wetuo obi, anyị ahụghịkwa ihe iyi egwu dị nso dị ka US kwuru. Ị ka na-ekwu na ọ dị - enwere ihe iyi egwu nke mbuso agha? Kedu ihe kpatara enwere ọdịiche a n'etiti gị na ndị Europe?
Ọnụ ego MR: Francesco, anyị ahụghị ihe dị iche ị na-ekwu.
AJỤJỤ: Ha na-ekwu ya. Ha na-ekwu n'ihu ọha na -
Ọnụ ego MR: Ihe anyị na-ahụ na ihe ị nwere ike ịhụ bụkwa nkwupụta. Na nkwupụta - nkwupụta ahụ, dịka ọmụmaatụ, sitere na European Commission nke kwuru n'ụzọ dị ịrịba ama ma ọ bụrụ na ọ bụghị - ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu asụsụ na nkwupụta sitere na G7 na NATO banyere nsonaazụ ga-adakwasị Russian Federation na ihe omume ahụ. nke mmegide dị otú ahụ megide Ukraine. O nwere - nke a abụghị naanị United States na-eme ikpe a. Anyị na ndị enyi Europe na ndị mmekọ anyị na-ekwu okwu dị ka otu egwu, yana ụlọ ọrụ na akụkụ dị iche iche dị ka NATO na OSCE na G7. Ma ọzọ, ọ bụrụ n'ileba anya n'asụsụ a - ma ọ gaghị eju gị anya ịnụ na nke a abụghị n'amaghị ama - ị ga-ahụ asụsụ yiri nke ahụ n'ofe ndị mmekọ anyị na ndị mmekọ anyị na n'ofe ụlọ ọrụ ndị a.
A bịa n’ihe ndị Rọshịa zubere, o doro anya dị ka ụbọchị na onye ọ bụla nwere ike ịhụ nnukwu mwube nke ndị agha Rọshịa n’akụkụ ókèala Ukraine. Anyị doro anya nke ọma banyere nchegbu anyị ma a bịa n'ụdị mmegide na mkpasu iwe ndị ọzọ nke ndị Rọshịa nwere ike ịchọ iwere ma wereworị. Mana ọ bụ naanị otu onye maara ihe Russian Federation na-echere Ukraine, nke ahụ bụ Vladimir Putin.
Ebumnuche anyị bụ igbochi na ịgbachitere atụmatụ ọ bụla dị otú ahụ, dịka anyị dị njikere ịga n'ihu n'ụzọ nke diplomacy na mkparịta ụka. Ị hụla ka anyị na-aga n'ihu n'ụzọ nke diplomacy na mkparịta ụka na ezi obi na nkwụsi ike n'ime izu ndị na-adịbeghị anya. Njem onye odeakwụkwọ na Geneva n'ikpeazụ n'izu gara aga bụ naanị nzọụkwụ kachasị ọhụrụ na usoro ahụ nke tinyekwara osote odeakwụkwọ na nzukọ ya na Russian Federation na Strategic Stability Dialogue, nzukọ na NATO-Russia Council, ntinye aka na gburugburu. nke OSCE, na ndị mmekọ ndị ọzọ na-etinyekwa aka na Russian Federation na njedebe a.
Ya mere, iji dokwuo anya, anyị dị njikere ịga n'ihu n'ụzọ a. Ụzọ a nwere ike ịga nke ọma ma ọ bụrụ na ọ na-ewere ọnọdụ n'ọnọdụ nke nkwụsịtụ. Ma naanị n'ihi na anyị dị njikere ma na-etinye aka na usoro na ụzọ nke diplomacy na mkparịta ụka apụtaghị na anyị adịghị akwadebe na nchekwa na mgbochi. Anyị na-eme ha abụọ n'otu oge ahụ kpọmkwem n'ihi na anyị dị njikere maka nhọrọ ọ bụla Vladimir Putin mere.
AJỤJỤ: Ị chere na ọ dị ihe iyi egwu nke mwakpo, na mwakpo ahụ nwere ike ịdị nso, ozugbo, dị ka ndị Europe na-ekwu na ị na-agwa ha, dịka ọgụgụ isi gị siri kwuo?
Ọnụ ego MR: Ọfọn, anyị akọwawo nke a n'ụzọ doro anya n'ọtụtụ ebe, gụnyere na ndụmọdụ consular anyị nyere n'abalị ụnyaahụ. Ihe iyi egwu nke anyị na-ahụ nke ahụ doro anya ọ bụghị naanị anyị mana o doro anya na onye ọ bụla na-ekiri ihe na-adịghị ahụ anya nyere ihe na-eme n'akụkụ ókèala Ukraine, ihe na-eme n'ime ihe kwesịrị ịbụ ókèala Belarusian, ọ bụ ihe na-akpata nchegbu dị ukwuu. Ya mere, anyị na-ewere nzọụkwụ dị akọ. Anyị, n'ezie, na-ekerịta ozi na ọgụgụ isi na ndị enyi anyị na-ekwu maka nchegbu anyị ma na-ekwukwa eziokwu na ndị Russia yiri ka ha dị njikere inwe ike ịme ihe ike megide Ukraine n'oge ọ bụla.
AJỤJỤ: Mana iji sochie isi okwu Francesco -
AJỤJỤ: Na naanị otu ikpeazụ. Anyị kwesịrị ịtụ anya nzute ọhụrụ ma ọ bụ nzukọ ma ọ bụ nzukọ mebere n'etiti odeakwụkwọ na Minista mba ofesi Lavrov mgbe nzaghachi na-adịbeghị anya?
Ọnụ ego MR: Ọfọn, ị nụrụ n'ọnụ Minista mba ofesi n'izu gara aga. Ị nụkwara site na odeakwụkwọ n'izu gara aga na anyị ga-enye nzaghachi ederede. Anyị na-emeghe maka ntinye aka ndị ọzọ, ntinye aka n'ime mmadụ, ma ọ bụrụ - ọ bụrụ na ọ bara uru ma ọ bụrụ na anyị chere na ọ nwere ike ịba uru, ma ọ bụrụ na anyị chere na ọ ga-abụ ihe na-esote ka anyị na-agbaso ụzọ mkparịta ụka na diplomacy. Ya mere, anyị na-emeghe ya.
AJỤJỤ: N'ịgbaso ajụjụ Francesco, nkeji ole na ole gara aga onye na-ekwuchitere Pentagon kwuru, na m na-ehota ebe a, na ọ bụrụ na NATO kwesịrị ime ka NRF rụọ ọrụ, ha niile gwara ọnụ ọgụgụ ndị agha nke odeakwụkwọ Mr. Austin etinyela na njikere dị elu na-abịa. ihe dị ka ndị ọrụ 8,500. N'ime nke ahụ - n'akụkụ ahụ, onye bụbu onye nnọchi anya US na Ukraine John Herbst gwara NPR n'ụtụtụ a na ya chere na okwu ọ bụla gbasara ibuga ndị agha US ka ọ bụrụ ihe mgbochi ọzọ kwesịrị ime tupu ugbu a. Kedu ihe kpatara o jiri bịa na ngwụcha izu a na nchịkwa Biden na-ekpebi itinye ndị agha US n'ọnọdụ ebuga n'ihu dị ka akụkụ nke NATO iji zipu ozi na Vladimir Putin isi?
Ọnụ ego MR: Ọfọn, ka m kwuo isi ihe abụọ. Nke mbụ, m ga-agakwuru onye ọrụ ibe m na onye bu ya ụzọ ka m kwuo maka atụmatụ ndị Pentagon na-arụ ọrụ, ma Onye isi ala ahụ doro anya nke ọma banyere ihe ga-esi na Russian Federation pụta ma ọ bụrụ na Russia ga-aga n'ihu na mmegide ọzọ. megide Ukraine. Anyị na-ekwu okwu nke aku na uba na ego pụta na Russia ga-edi nke ga-n'ọtụtụ ụzọ na-enwetụbeghị ụdị ya, jikoro na anyị nnọọ pointedly họọrọ ghara ime na mgbe 2014. Anyị na-ekwu nke ọzọ etoju nke agbachitere nchebe enyemaka na anyị. ga-adị njikere inye anyị Ukrainian mmekọ, n'elu na karịrị $650 nde na anyị nyere Kyiv n'ime afọ gara aga naanị. Nke ahụ bụ enyemaka nchekwa karịa ka enyerela ndị mmekọ anyị na Ukraine otu afọ.
Mana Onye isi ala ahụ gosikwara na ọ bụrụ na ndị Russia ga-aga n'ihu, na anyị ga-emesi akụkụ ọwụwa anyanwụ nke NATO ike. Mana ọbụlagodi dịka anyị kwuworo nke ahụ, ọ dịbeghị mgbe anyị wepụrụ nhọrọ nke inye enyemaka ndị ọzọ tupu mbuso agha. Ya mere, e nwere ọtụtụ ihe na-esi na ya pụta na anyị kwupụtaworo na Russian Federation ga-atachi obi. Enwere ọtụtụ usoro anyị na-eme ugbu a n'ihe gbasara enyemaka nchekwa nchekwa anyị na Ukraine, n'ihe gbasara ozi mgbochi nke anyị na-ewepụta maka nsonaazụ ga-adakwasị Russian Federation, ma ugbu a ihe ị na-anụ. site n'aka onye ọrụ ibe m na Pentagon.
AJỤJỤ: Na-esote nke ahụ, enweela mkparịta ụka ndị a gbasara ma a ga-eji ndị agha US - nke ahụ abụrụla akụkụ nke nzaghachi na-aga n'ihu n'ime nchịkwa Biden tupu akụkọ ndị a amata n'ihu ọha na ngwụcha izu a? Nke ahụ ọ̀ bụ akụkụ na-arụsi ọrụ ike nke nkwurịta okwu ahụ banyere otu a ga-esi mee ihe banyere mwakpo ndị Russia?
Ọnụ ego MR: M ga-ekwu n'ozuzu, n'ekwughị okwu n'ime mkparịta ụka, na ihe dị ka nke a agaghị abụ ọha ma ọ bụrụ na e webatara ya. Anyị na-atụle ọtụtụ usoro, ị na-anụkwa Pentagon na-agwa ya okwu n'ihu ọha taa. Eziokwu ahụ bụ́ na ha na-agwa ya okwu n’ihu ọha taa na-egosi na ọ bụghị ihe ọhụrụ ka anyị na-atụle nzaghachi nye ihe anyị na-ahụ ugbu a.
AJỤJỤ: Emebere nke a iji mee ka ndị Russia nwee ike ịtụgharị uche n'iwebata ndị agha ọzọ n'ime Belarus ma na-agbalị ịkwalite ọnụnọ ya na mpaghara ndịda Ukraine?
Ọnụ ego MR: Ebumnuche anyị n'ihe a niile bụ ịgbachitere na igbochi. Ya mere, anyị na-ewere usoro dị iche iche iji chebe Ukraine, gụnyere site n'inye enyemaka nchekwa nchekwa, ma na-eme ọtụtụ usoro iji gbochie ihe Russian Federation na ihe Vladimir Putin kpọmkwem nwere ike iburu n'uche. Yabụ na ajụjụ gị, ee.
AJỤJỤ: Ma ọzọkwa: Onye nnọchi anya US na UN nyere nkọwa nkenke taa na mbụ, ajụjụ wee bilite ụdị mkparịta ụka ya na ndị otu ndị ọzọ nọ na Security Council na-enwe banyere ọnọdụ a, onye nnọchi anya US Thomas-Greenfield kwenyekwara na ọ. ya na onye otu ya na Rọshịa na-akparịta ụka. Kedu ihe e boro ya ebubo ịgwa onye nnọchi anya Nebenzya banyere iyi egwu US na-ahụ na ọbụbụeze Ukraine? Kedu ihe kpatara na US na-agbalighị maka nnọkọ Security Council n'okwu a tupu Russia eweghara ọchịchị onye isi ala na Tuzdee na-abịa?
Ọnụ ego MR: Ọ dị mma, echere m na ị nụkwara n'aka onye nnọchi anya na ya na ndị otu ya na Security Council na ndị otu ya sara mbara na UN na-akpakọrịta. O kwetara na ya na onye otu ya na Rọshịa na-akpakọrịta, mana enwere m ike ịgwa gị - ma echere m dịka ị nụkwara n'ọnụ ya - na ọ bụghị naanị onye otu ya na Rọshịa ka ọ na-agwa okwu. M ga-atụ anya na ị ga-anụ n'ọnụ ya na njikọ ya na ndị anyị na ha jikọrọ aka, gụnyere ndị nọ na Security Council, na ndị mmekọ anyị abawanyela karịa ka njikọ ya na onye otu ya na Russia nọ na Security Council.
Mana n'ihe gbasara ozi ahụ, ozi ndị Rọshịa na-anụ n'ọnụ anyị doro anya ma bụrụkwa nke na-agbanwe agbanwe. O doro anya ma na-agbanwe agbanwe n'ihu ọha; o doro anya ma na-agbanwe agbanwe na nzuzo. Nke mbụ, anyị na-ahọrọ ụzọ nke diplomacy na mkparịta ụka. Anyị kwenyere na ọ bụ naanị ụzọ dị mkpa iji gbasoo mgbakasị ahụ na ịkwụsị mmegide Russia na-aga n'ihu megide Ukraine na gịnị - atụmatụ ọ bụla ọzọ nke Russian Federation nwere ike ịchekwa. Ha anụwokwa - ha anụwokwa nke a na ntinye aka anyị na nzuzo, kamakwa n'ihu ọha - na dịka anyị dị njikere maka mkparịta ụka na diplomacy, anyị na-agbaso mgbachitere na mgbochi, na anyị agwala nke ahụ. ọtụtụ ugbua taa. Ma ndị Russia maara, n'ihi na ha anụwo ya n'ọnụ anyị kpọmkwem, na anyị dị njikere itinye aka. Ha maara na e nwere ụfọdụ okwu ebe anyị na-eche na mkparịta ụka na diplomacy nwere ike redound ọma na anyị mkpokọta nchekwa, mkpokọta nchekwa nke transatlantic obodo, na ọ nwere ike inye aka zaa ụfọdụ n'ime nchegbu ndị Russian Federation mere.
Ma ha anụwokwa n'ọnụ anyị, nke a dịkwa mkpa, na e nwere mpaghara ndị ọzọ, gụnyere NATO "Open Door" amụma, ebe enweghị ohere ahia. Ọ dịghị nke ọ bụla. Ya mere, n'ofe aka anyị niile, ma ọ bụ odeakwụkwọ, osote odeakwụkwọ, onye nnọchiteanya Thomas-Greenfield, ozi ndị ahụ doro anya ma na-agbanwe agbanwe.
AJỤJỤ: Ned, Achọrọ m ịgbanwe isiokwu.
Ọnụ ego MR: Ihe ọ bụla ọzọ dị - ọ dị mma, ahụrụ m na enwere ike ịnwe ajụjụ abụọ ọzọ. Ben.
AJỤJỤ: Ee, nchụpụ akụkụ nke ụlọ ọrụ nnọchiteanya na-egosi n'ụzọ doro anya na ị na-eche banyere nchekwa nke ndị America na Ukraine. I mekwara ka o doo anya ihe ga-eme ma ọ bụrụ na Rọshịa ga-awakpo. Ị ga-eji ohere a ugbu a dọọkwa Russia aka ná ntị megide imerụ ndị America ọ bụla ma kwuo ihe ga-esi na ya pụta ma ọ bụrụ na ha emee?
Ọnụ ego MR: Ya mere, ka m were ajụjụ ahụ ma mee ka o doo anya na anyị enweghị ihe kacha mkpa karịa nchekwa na nchekwa nke ndị America gburugburu ụwa. N'abalị ụnyaahụ, ị ​​nụrụ ka anyị na-agwa usoro amamihe dị na ya nke anyị na-eme n'ihe gbasara obodo ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị na Kyiv, ebe ị maara na ndị Rọshịa nwere nnukwu ụlọ agha a, na ha nwere ike ịdị njikere ime ihe ike dị egwu n'oge ọ bụla. Ya mere, ọpụpụ ikike nke ndị ọrụ na-abụghị ndị ọrụ mberede nke ụlọ ọrụ nnọchi anya ụlọ ọrụ anyị na iwu ọpụpụ nke ndị dabere bụ akụkụ na nke na-egosipụta ihe kacha mkpa anyị na-etinye na nchekwa na nchekwa nke ndị America.
Achọghị m ịbanye na mkparịta ụka nkeonwe, mana anyị emeela ka ndị Russia doo anya nke ọma ihe anyị na-etinye na nchekwa na nchekwa nke ndị America. Ha maara na nke ahụ bụ ihe kacha anyị mkpa. Ha maara na anyị na-eme mgbalị pụrụ iche iji chebe nchekwa na nchekwa ha. Aga m ahapụ ya na nke ahụ.
AJỤJỤ: N'ihe banyere ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ, nke ndị America n'ime Ukraine, ụnyaahụ m maara na State Department agaghị adọta na kpọmkwem ọnụ ọgụgụ. Mana ọ bụ n'ihi na ị maghị ole ma ọ bụ na ị gaghị ekwu ole ndị America nọ n'ime Ukraine?
Ọnụ ego MR: Ihe mgbaru ọsọ anyị mgbe niile bụ ịnye gị ozi nke oge na nke ziri ezi, ma ugbu a anyị enweghị - ọnụ ọgụgụ anyị chere na ọ bụ nke ziri ezi nke ọnụ ọgụgụ ndị America, ndị America nkeonwe, ndị bi na Ukraine, na m ga-agwa gị. gi mere. Ị nụla nke a n'ọnọdụ Afghanistan, mana mgbe ndị America na-eme njem na mba ofesi, n'ezie, a chọghị ka ha debanye aha na ụlọ ọrụ nnọchiteanya dị na mba. Anyị na-agba ndị America ume ka ha debanye aha mgbe ha na-eji usoro a na-akpọ STEP eme njem na mba ọzọ, mana echere m na ọtụtụ n'ime unu nwere ike ịgba akaebe, mgbe ị na-eme njem esenidụt, ị nwere ike ọ gaghị eme ya mgbe niile. Ma eleghị anya, ụfọdụ n’ime unu emetụbeghị otú ahụ.
N'otu aka ahụ, mgbe ndị America hapụrụ obodo ahụ, ọ ga-adị mkpa ka ha debanye aha onwe ha. Ya mere, n'ihi na ọtụtụ ndị nwere ike ghara ịdebanye aha na mbụ, echere m na ọ bụ echiche dị mma na ọtụtụ - ndị na-edebanye aha n'ezie nwere ike ọ gaghị ewepụ onwe ha na ọnụ ọgụgụ nke ụmụ amaala America ndị nwere ike ibi na mba ọzọ.
Isi okwu nke ọzọ bụ na ọbụlagodi mgbe ndị mmadụ debanyere aha, ngalaba steeti enweghị ike ịchọpụta n'onwe ya na onye debanyere aha na STEP, usoro a na-akpọ STEP, bụ nwa amaala America n'ezie. Yabụ enwere ọnụọgụ - n'ihi ọtụtụ ebumnuche, ngụkọta - anyị enweghị ọnụọgụ ziri ezi ugbu a.
Mgbe anyị na ndị America zigaara ozi na - obodo amaala America nkeonwe na Kyiv, na Ukraine n'ụbọchị ndị na-adịbeghị anya, anyị agbaala ha ume ka ha dejupụta mpempe akwụkwọ ga-enyere anyị aka inweta nnukwu granularity na nha nke obodo America - nkeonwe. na Ukraine. Ma nke ahụ abụghị nnọọ ihe anyị nwere ugbu a.
AJỤJỤ: Na otu ọzọ. Ị kwuru Afghanistan. M na-eche ma ọ bụrụ na ọ dị - ọ nwere ihe ọ bụla sitere na Afghanistan nke ị mụtara banyere ịchọta na ịzọpụta ndị America n'ime mpaghara agha nke ị chere na enwere ike itinye ebe a?
Ọnụ ego MR: Ọfọn, ndị a doro anya na ọ bụghị ihe atụ ọnọdụ, ya mere, m ga-asị na-atụ aro ọzọ. Isi ụgwọ anyị bụ ime ka ndị obodo US mara maka mmepe nchekwa na nchekwa. Nke ahụ bụ ihe anyị mere n'oge na-adịbeghị anya mgbede ụnyaahụ mgbe anyị nyere ndụmọdụ ndụmọdụ njem emelitere yana ndenye mgbasa ozi na-eso ya iji mee ka ha mara maka mmepe nchekwa na nchekwa. Nke ahụ nwekwara ike ịgụnye ozi gbasara nhọrọ njem azụmahịa.
Anyị emeela nke a n'ihi na, dị ka Onye isi ala kwuru, agha ndị Russia nwere ike ịbịa n'oge ọ bụla. Anyị niile makwaara na anyị niile ahụla ihe ndị na-egosi na ọ bụ otú ahụ, n'ihi na ndị agha na-ebuli elu. Anyị edokwara anya na anyị agaghị enwe ike ịchụpụ ụmụ amaala US, ụmụ amaala US nkeonwe, n'ụdị ọnọdụ a. Yabụ na ọ bụ ya mere anyị ji gbaa ụmụ amaala US nkeonwe ndị nwere ike ịnọ na Ukraine mee atụmatụ ya, gụnyere site n'iji onwe ha na nhọrọ azụmaahịa ha họrọ ịpụ na mba ahụ. N'agbanyeghị na anyị na-ebelata nha ụkwụ nke ụlọ ọrụ ndị nnọchianya anyị, ụlọ ọrụ nnọchiteanya nọ ebe ahụ iji nyere ụmụ amaala America aka na nke a. Anyị nọ na a - anyị nwere ikike ịnye, dịka ọmụmaatụ, mgbazinye ego mweghachi maka ndị America ọ bụla na-achọ iji nweta onwe ha nke nhọrọ azụmahịa ahụ ịlaghachi na United States.
AJỤJỤ: Ned -
AJỤJỤ: Enwere m ike ime nke a -
AJỤJỤ: Ọ bụrụ na ị naghị eche.
AJỤJỤ: Nke mbu, kedu ihe ịchọrọ inweta site na nzukọ gị na Biden na ndị isi Europe na-enwe? Atụrụ anya na ọ na-ewulite nzukọ Mazị Blinken n'ụtụtụ a. Yabụ kedu ihe ịchọrọ imezu na nke ahụ?
Abụọ, na nzukọ n'ụtụtụ a nke Mr. Blinken nwere na European Council, ọ nwetara ajụjụ gbasara mkpebi US ịmalite ibelata ụlọ ọrụ nnọchiteanya? N'ihi na ụfọdụ ndị Europe anọghị n'otu ibe, yana dịka Francesco na-ekwu, anyị na-atụ aro na ọ dị mkpa ka a kpọọ okwu ahụ ntakịrị, na ọ dịghị ihe dị iche na nchekwa na-atụ aro mwakpo dị nso. Yabụ kedu ihe ị tụrụ anya inweta, gịnịkwa ka Maazị Blinken nụrụ gbasara ụzọ America si aga?
Ọnụ ego MR: Ya mere, dị ka i kwuru, Barbara, odeakwụkwọ keere òkè na mbụ taa na EU's Foreign Affairs Council. Onye isi oche EU Josep Borrell kpọrọ ya òkù. Iji nye gị ụtọ nke ahụ, odeakwụkwọ ahụ gwara ndị otu ya okwu banyere nleta ya n'izu gara aga na Kyiv, Berlin na Geneva. Dịka akụkụ nke mbọ a, anyị agwala ya – iwetu esemokwu nke mwelite ndị agha Russia na-akpasughị iwe kpatara na mwakpo ọ na-aga n'ihu megide Ukraine kpatara.
Na ntinye aka n'ụtụtụ a, odeakwụkwọ kwusiri ike na anyị ga-aga n'ihu na-ejikọta EU na mba ndị otu ya na mgbakwunye na ụlọ ọrụ ndị ọzọ nke multilateral anyị kwuburu. Nke ahụ bụ NATO, nke ahụ bụ OSCE, yana ndị mmekọ na ndị mmekọ. Na n'ime nzukọ a, odeakwụkwọ ahụ gosipụtara na site n'ịkọwa ha banyere njikọ aka n'izu gara aga, n'ezie gụnyere ntinye aka na Minista Mba Ọzọ Lavrov.
Ị hụrụ na obere oge ka nzukọ ya na Minista mba ọzọ Lavrov mechara na Fraịde, odeakwụkwọ ahụ nwekwara ohere ịgwa onye otu ya na Ukraine okwu iji kwado ya na mkparịta ụka ndị ahụ nkenke, na nke ahụ bụ omume anyị mere n'ime usoro nke ihe niile. njikọ anyị - na ndị mmekọ Europe, ndị mmekọ Europe, gụnyere ndị mmekọ Ukraine, n'ihi na anyị na-arụ ọrụ site na njedebe nke ihe ọ bụla gbasara ha na-enweghị ha. Ọ dịghị ihe ọ bụla banyere Ukraine na-enweghị Ukraine. Ọ dịghị ihe ọ bụla banyere Europe na-enweghị Europe. Ọ dịghị ihe ọ bụla gbasara NATO na-enweghị NATO.
N’ihi ya, ikere òkè nke odeakwụkwọ ná nzukọ taa bụ ohere ọzọ n’ebe ọzọ anyị ga-eme nnọọ nke ahụ. Onye isi ala, n'ezie, etinyekwala aka na nke a. Ị hụrụ na ọ kpọkọtara ndị otu ya, ma n'onwe ya ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ, na Camp David na ngwụcha izu ụka iji kparịta nke a. Ya mere, o kwesịghị iju anyị anya na Onye isi ala ga-enwe ohere ịgwa ndị ogbo ya okwu n'okwu ndị a n'otu aka ahụ - na-eburu otu ihe ahụ n'uche.
Mgbe a bịara na mkpebi ahụ anyị mere n'abalị ụnyaahụ, achọrọ m ikwughachi isi ihe, na nke a bụ banyere otu criterion na otu criterion naanị, na nke ahụ bụ nchekwa na nchekwa nke ndị otu anyị na ala na Ukraine. . Ma ọ bụ nzọụkwụ dị akọ mgbe ọ bịara n'iwu ọpụpụ nke ndị dabere. Ọ bụ nzọụkwụ amamihe dị na ya mgbe ọ bịara na ikike ịpụ ndị ọrụ na-adịghị mkpa.
Ma ka m doo anya na mkpebi ahụ ekwughị ihe ọ bụla banyere nkwa anyị kwere ọbụbụeze Ukraine na iguzosi ike n'ezi ihe ókèala ya. Nkwenye anyị na ọbụbụeze na ókèala Ukraine enweghị mgbagha. Ụlọ ọrụ nnọchiteanya ahụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na charge, n'ezie, na-anọgide na Ukraine. Eziokwu ahụ bụ na anyị na-akpachapụ anya nke ọma maka nchekwa na nchekwa nke ụmụ amaala US n'ụzọ ọ bụla adịghị emebi nkwado anyị maka ma ọ bụ nkwa anyị na Ukraine. Ị hụla na nkwado na-ewere ụdị ọ bụla.
N'ezie, odeakwụkwọ bụ nanị na Kyiv izu gara aga, ebe ị nụrụ ka ọ na-ekwughachi ozi ndị a n'akụkụ President Zelenskyy, na-esote Minista mba ọzọ Kuleba. Anyị gara n'ihu na-enye enyemaka nchekwa nchekwa. Mbufe izizi nke nde $200 nke enyere ikike na Disemba rutere Kyiv n'abalị Fraịde ruo Satọde. Anyị ga-aga n'ihu na-enye ndị mmekọ anyị aka nchekwa nchekwa, anyị ga-aga n'ihu na-egosipụta n'ụzọ doro anya nkwa na-adịgide adịgide anyị nwere maka iguzosi ike n'ezi mpaghara na ọbụbụeze nke onye mmekọ anyị Ukraine.
AJỤJỤ: Enwere m ike isochi ya?
Ọnụ ego MR: Biko.
AJỤJỤ: N'ihi na ị kwuru ọzọ na ọ bụ amamihe nzọụkwụ, ma Ukraine Gọọmenti megidere n'ụzọ doro anya omume a na ndị ozi mba ọzọ taa kpọrọ ya nke ukwuu ịkpachapụ anya. Enwere echiche na nchịkwa na nke a nwere ike ịkpata ụjọ n'ime Ukraine n'oge nke ahụ bụ kpọmkwem ihe Russia na-agbalị ime site n'ịkpalite ọgba aghara na mba ahụ?
Ọnụ ego MR: Nke a bụ maka otu ihe na otu ihe naanị ya -
AJỤJỤ: Ị tụlewo ụjọ ahụ ọ gaara akpata?
Ọnụ ego MR: Ọ dị m nwute. Anyị mere ihe?
AJỤJỤ: Ị tụlere ụjọ ahụ ọ gaara akpata?
Ọnụ ego MR: Ihe anyị tụlere bụ nchekwa na nchekwa nke ndị America. Ma nke a bụ mkpebi nke naanị Gọọmenti United States nwere ike ime n'ihi na ọ bụ ihe kacha mkpa na anyị na-etinye aka na nchekwa na nchekwa nke, na nke a, ndị ọrụ ibe anyị na ezinụlọ ha. Nke a anaghị ekwu ihe ọ bụla na nkwado anyị na-enweghị mgbagha maka ndị mmekọ Ukraine. Ọ bụ maka otu ihe na otu ihe naanị: nchekwa dị warara na nchebara echiche nke ndị ọrụ ibe anyị.
AJỤJỤ: Mana nke a jikọtara ya na nkwupụta Pentagon taa banyere itinye ndị agha 8,500 na njikere, na mgbakwunye na mgbasa ozi ọha na eze na Fraịde na mbata nke enyemaka ọhụrụ na-egbu egbu, ọ dị ka ị na-abawanye nrụgide gị ebe a na Russia n'ụzọ ụfọdụ. Ị na-ajụ nke ahụ? Ị chere na ọnọdụ gị agbanweela ma ọlị?
Ọnụ ego MR: Nke a bụ maka nchekwa na mgbochi. Ihe anyị na-eche bụ na ọ ga-ekwe omume iwe iwe ndị Russia. Nke ahụ abụghị maka nchekwa. Nke ahụ abụghị maka mgbochi. Nke ahụ bụ maka ọrụ mkparị megide obodo nwere onwe, obodo nwere onwe nke bụ ezigbo mmekọ nke United States. Ya mere, iji tụnyere ihe abụọ a bụ ihe na-ezighị ezi, ọ bụkwa kpọmkwem ihe anyị na-anụ na Moscow. Ndị a bụ qualitatively dị iche iche na nzọụkwụ dị iche iche anyị na-eme. Ọ bụrụ na ndị Rọshịa ga-ebelata, ị gaghị ahụ kpọmkwem otu mmegharị ahụ sitere na ndị mmekọ Ukraine, sitere na NATO, si United States.
Nke a bụ isi okwu sara mbara, ma ị nụla ka odeakwụkwọ na-ekwu okwu a ugboro ugboro. Ọ n'ezie na nzukọ ya na Minista mba ofesi Lavrov na Friday mere nke a ozugbo, mere isi okwu a ozugbo na Minista mba ọzọ. O kwuru n'ezie na United States aghọtaghị usoro nhazi nke Russia ebe a n'ihi na n'ime afọ niile na n'ọnọdụ nke mmụba a, Vladimir Putin na Russian Federation emeela ihe niile ọ chọrọ igbochi. Ị nụwokwa ka odeakwụkwọ na-ekwu okwu na nkwado na-arịwanye elu maka ndị òtù NATO n'etiti ndị Ukraine kemgbe 2014, ọkwa nkwado nke dị ihe dị ka okpukpu abụọ. Ị nụwo ka anyị na NATO dị ka njikọ aka na-ekwu maka atụmatụ mmesi obi ike nke ndị Russia na-ebuso agha na-enweghị isi megide Ukraine na 2014.
Yabụ na ndị Russia nwere ike ime mkpesa nke ọma ma nwee ike ịdeba ama ma rụtụ aka na mbọ ndị a maka ịgbachitere na mgbochi, mana ọ bụ mmegide ha mere ka ọ pụta ìhè kpọmkwem ihe anyị na-anụ ma hụ ka ha na-atụ aka.
Ma ebe a bụ nchegbu ọzọ, na anyị emebeghị ọkpụkpụ banyere nke a: nchegbu anyị na ndị Russia, dị ka ha mere na 2014, nwere ike na-achọ ịmepụta ihe ngosi maka mmegide ọzọ megide Ukraine. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime nke ahụ, nke a bụ n'ụzọ ụfọdụ ka ọ ga-adị. Nke ahụ bụ ihe na-ewute anyị ruo oge ụfọdụ. Ọ bụ ya mere anyị ji gwa ọ bụghị naanị nchegbu ahụ n'ụzọ sara mbara kamakwa ihe kpatara anyị ji tinye ozi n'aka anyị kpọmkwem nke na-ekwu maka usoro ndị Russian Federation nwere ike na-eme na njedebe a.
AJỤJỤ: Enwere m ike ịnwe otu ọzọ, biko?
Ọnụ ego MR: Ka m kwe ka Conor mechie.
AJỤJỤ: Mba, ọ dị mma. Naanị otu ajụjụ ikpeazụ kpọmkwem na ajụjụ nke ịdị n'otu NATO. Onye ozi mba ọzọ nke Ukraine kwuru ọzọ na Germany na-emebi ịdị n'otu na Alliance, n'otu akụkụ n'ihi na ha na-egbochi Estonia ibufe ngwa ọgụ, ha agaghị enye ngwa ọgụ n'onwe ha, nkwupụta sitere n'aka onye isi ụgbọ mmiri ha na ngwụcha izu - ma ọ bụ izu gara aga. Ị nwere nzaghachi ọ bụla na nke ahụ, echiche a na Germany adịghị eme nke ọma n'ime Alliance iji kwado otu ihu dị n'otu?
Ọnụ ego MR: Onye odeakwụkwọ ahụ nwere ohere izute ọ bụghị naanị Chancellor Scholz kamakwa ya na Minista mba ofesi Baerbock n'izu gara aga na Berlin, a jụrụ onye ozi ala ọzọ ajụjụ a guzo n'akụkụ odeakwụkwọ. Ọ gwakwara ya kpọmkwem ihe Germany na-eme, onyinye dị mkpa Germany na-enye Ukraine. M ga-ahapụ ya na Germany ka m gwa onyinye ndị ahụ dị mkpa okwu. Ma iji doo anya, ọ dịghị ìhè ehihie n'etiti ndị mmekọ anyị na ndị mmekọ anyị banyere ihe ọjọọ ga-adakwasị Russian Federation ma ọ bụrụ na ọ ga-aga n'ihu.
AJỤJỤ: Kedu ihe mgbapụ ga-adị ka?
AJỤJỤ: Naanị otu ihe na Ukraine, otu ihe ikpeazụ na Ukraine.
AJỤJỤ: Ọ ga - eweda elu - kedu ihe nbibi ga-adị ka? M pụtara, ha nwere - ugbu a, a na-ebo ebubo na ha nwere ndị agha 100,000 na mpaghara nke ha n'akụkụ oke. Ya mere mwepu ga-adị ka ma ọ bụrụ na ha wepụrụ ndị agha 25,000? M pụtara, kedu ihe nbibi ga-adị ka?
Ọnụ ego MR: Ọ nwere ike ịgụnye nke ahụ. Agaghị m ede akwụkwọ.
AJỤJỤ: Ọ nwere, dị ka, ọnụ ọgụgụ ị ga-achọ ịhụ?
Ọnụ ego MR: Lee, agaghị m ede akwụkwọ maka nke ahụ. Echere m na mgbakasị ahụ nwere ike were ọtụtụ ụdị. O nwere ike were ụdị ihe anyị na-ahụ na ihe anyị hụrụ n'akụkụ ókèala Ukraine. Ọ nwere ike were ụdị ihe anyị na-ahụ n'ihe gbasara ọrụ ndị Russia na ihe kwesịrị ịbụ mba ọzọ na-achị achị, Belarus. Ọ nwere ike were ụdị ihe anyị na-anụ site na Russian Federation. De-escalation nwere ike were ọtụtụ ụdị.
Ọ nwere ike were ọtụtụ ụdị dị ka nzọụkwụ mbụ, na nke ahụ bụ ihe anyị ga-achọ ịhụ na njedebe njedebe n'uche ịhụ ndị agha Russia na-alaghachi n'ogige ha na-adịgide adịgide, iji kwụsị nke a ma kwụsị ma gbanwee ihe a na-ewu n'akụkụ ókèala Ukraine. ka ọ kwụsị na nkwuwa okwu ike. De-escalation nwere ike were ọtụtụ ụdị. Anyị ga-anabata nke ọ bụla n'ime ya.
AJỤJỤ: Yabụ naanị - naanị ma ọ bụrụ na ndị agha Rọshịa laghachiri n'ogige ha n'oge niile - a ga-ewere ya dị ka mbelata?
Ọnụ ego MR: Mba. Ihe m na-ekwu bụ na e nwere ọtụtụ ụdị de-escalation nwere ike ime. Enwekwara continuum. Anyị ga-anabata, opekata mpe dị ka nzọụkwụ mbụ, ụdị nbibi ọ bụla.
Ọnụ ego MR: Ee.
AJỤJỤ: Ee, ị maara nzukọ a ga-enwe na Paris na Wednesde n'etiti ndị ọrụ Ukraine na ndị Russia, ị na-atụkwa anya ọganihu ọ bụla?
Ọnụ ego MR: Ee, yabụ anaghị m atụ anya itinye aka na America ọ bụla na nke ahụ. Ka ahụ. Dị ka ị maara, anyị na ndị mmekọ na ndị mmekọ, gụnyere Ukraine, na-ekwurịta maka usoro ndị ọzọ, anyị na ndị Russian Federation na-akpakọrịtakwa, dịka anyị kwuru. Anyị kwenyere na diplomacy bụ ụzọ kacha mma na-aga n'ihu, anyị dịkwa njikere ịkwado mkparịta ụka na diplomacy nke na-eme ka esemokwu kwụsị. Ya mere, anyị na-akwado mgbalị ndị a na-eme n'akụkụ nke Russian Federation na ezi okwukwe.
AJỤJỤ: Ị hụla tweet nke onye otu gị na Ukraine, ọnụ na-ekwuchitere? Ọ tweeted mgbe anyị nọ na nkenke okwu. Aga m agụ ngwa ngwa, sị: “E nwere ndị nnọchi anya mba 129 na Ukraine. N'ime ndị a, naanị mmadụ anọ ekwupụtala ọpụpụ nke ndị ezinaụlọ nke ndị ọrụ: US, UK, Australia na Germany. Ndị ọzọ, gụnyere EU, OSCE, COE, NATO, na UN, ekwupụtabeghị ebumnuche ha ịgbaso usoro ndị ahụ akabeghị aka.” Ị nwere nzaghachi na nke ahụ?
Ọnụ ego MR: Agaghị m.
AJỤJỤ: Anyị na-anụ na ha bụ -
Ọnụ ego MR: Enweghị m nzaghachi na nke ahụ. Naanị okwu m ga-abụ ihe ị nụburu ka m na-ekwu. Nke a dabere na otu criterion na otu criterion naanị. Ọ bụ ihe kacha mkpa anyị na-etinye aka na nchekwa na nchekwa nke ndị ọrụ ibe anyị na Ukraine.
AJỤJỤ: Ọ dị mma. Enwere m ajụjụ Iran - ndo.
Ọnụ ego MR: Enwere ihe ọ bụla ọzọ na Russia-Ukraine? Ee.
AJỤJỤ: Enwere m ihe nleba anya na mbupụ. esi m na mgbasa ozi Ukraine -
Ọnụ ego MR: Ah, ndewo.
AJỤJỤ: - na achọrọ m ime ka o doo anya na United States achụpụghị ndị nnọchiteanya ọbụna n'ime ụbọchị kachasị njọ n'ime afọ asatọ gara aga. Na Kyiv dị nnọọ anya site n'ókè Russia. Ọ pụtara na site na ihe ọmụma gị na site na ọgụgụ isi gị, isi obodo anyị - isi obodo Ukraine na-ezubere iche na ọ bụ isi ebumnuche nke mbuso agha Russia?
Ọnụ ego MR: Ọfọn, lee, n'ezie, agaghị m agwa onye ọ bụla ọgụgụ isi okwu, ma dị ka anyị kwuru, gụnyere na anyị mara ọkwa n'abalị ụnyaahụ, anyị na-eme nke a dị ka a amamihe nzọụkwụ n'ihi na-aga n'ihu na ndị Russia na-agba mbọ imebi obodo. na imebi nchekwa nke ụmụ amaala Ukraine na ndị ọzọ na-eleta ma ọ bụ bi na Ukraine.
AJỤJỤ: Ndị ọrụ United States ekwuola ugboro ugboro - yabụ ị bụ - na ị gaghị ada mbà na mbọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Russia. Biko ị nwere ike dokwuo anya? Ị kwuworị banyere nchekwa - nchekwa mkpokọta. Gịnị kpọmkwem ka ị na-ekwu? Ebee ka enwere ohere maka mkparịta ụka na Russia? Gịnịkwa bụ isiokwu nke ikwekọrịta?
Ọnụ ego MR: Ya mere, anyị anọgidewo na-ekwu na anyị dị njikere itinye aka na mkparịta ụka na diplomacy, na anyị na-etinye aka na mkparịta ụka na diplomacy na Russian Federation mara, n'ezie, na ndị Russia ebipụtawo ha abụọ nkwekọrịta. Enwere ụfọdụ ihe dị na nkwekọrịta ndị ahụ, dịka ị nụworo ka anyị na-ekwu ugboro ugboro, ndị na-abụghị ndị mmalite, gụnyere ụkpụrụ NATO nke a na-akpọ "Open Door" amụma.
Mana enwere mpaghara ndị ọzọ - ebe mkparịta ụka na diplomacy nwere ike inye aka melite nchekwa mkpokọta anyị, nchekwa transatlantic. M ga-ekwu na ọbụna tupu a malite iwulite ndị agha Rọshịa n'akụkụ ókèala Ukraine, anyị enweelarị nnọkọ abụọ nke mkparịta ụka Strategic Stability Dialogue, ebe osote odeakwụkwọ Sherman jiri n'izu nke ọzọ zute onye otu ya na Russia iji kparịta ụfọdụ n'ime ihe ndị a. okwu. Na eziokwu na ihe a na-akpọ SSD malitere mgbe nzuko dị n'etiti President Putin na President Biden na June na-ekwu maka eziokwu ahụ bụ na anyị kwenyere na e nwere okwu ma a bịa n'ihe banyere njikwa ngwá agha, dịka ọmụmaatụ, ebe anyị nwere ike inwe mkparịta ụka na-amị amị. ndị Russia nwere ike ileba anya na nchekwa anyị, nke pụtara ndị nọ na United States na ndị enyi anyị na ndị mmekọ anyị, ma nwee ike ịzaghachi ụfọdụ nchegbu ndị Russia kwuru. Ya mere, anyị ekwuwo kpọmkwem maka ntinye nke ngwa agha na Europe, nhọrọ maka ngwa agha nuklia na-abụghị nke atụmatụ, njikwa ogwe aka ndị ọzọ, na ndị e mere iji mee ka nghọta na nkwụsi ike dịkwuo elu.
Isi ihe dị na nke ahụ bụ na nzọụkwụ ọ bụla anyị ga-eme agaghị abụ nkweta. Ha ga-adị mkpa ka ha na-emeghachi omume, nke pụtara na ndị Russia ga-emekwa ihe ga-enyere aka melite nchekwa anyị - ọnọdụ nchekwa anyị.
Isi ihe ikpeazụ na nke a: Ihe a niile bụ na a ga-aga n'ihu na-eduzi ya na ndụmọdụ zuru oke na ndị mmekọ anyị na ndị mmekọ anyị, nke ahụ gụnyere Ukraine. Mgbe odeakwụkwọ zutere President Zelenskyy, mgbe ọ zutere President Kuleba - ma ọ bụ Foreign Minister Kuleba, mgbe ọ na-agwa Minista Minista Kuleba okwu na Friday mgbe ya na Minista mba ọzọ Lavrov zutere, anyị na-na-na-na-n'ụzọ zuru ezu transperent na anyị na Ukraine mmekọ banyere. Okwu ndị a na-atụle na ọganihu nke njikọ aka ndị ahụ.
AJỤJỤ: (Anaghị ekwu okwu) na okwu Palestine?
Ọnụ ego MR: Enwere ihe ọ bụla ọzọ na Russia-Ukraine? Ben, otu -
AJỤJỤ: Ee. Onye odeakwụkwọ ahụ ga-ebuli Paul Whelan na Trevor Reed na mkparịta ụka ya na Minista Mba Ọzọ Lavrov. Enwere mmelite ọ bụla? Ị chere na ọnọdụ dị ugbu a ga-eme ka ọ dịkwuo mma ma ọ bụ ka njọ maka ọnọdụ ha?
Ọnụ ego MR: Nke ahụ dị n'ezie na Russian Federation. Enwere m ike ikwenye, dị ka odeakwụkwọ ahụ kwuru tupu nzukọ ahụ, na o welitere okwu banyere Paul Whelan na Trevor Reed, bụ ndị ha abụọ na-aga Russia dị ka ndị njem nleta na ndị e jigidere n'ụzọ na-ezighị ezi ruo ogologo oge, kwuru na ọ bụ ya. ogologo oge gara aga ịhụ ka ha lọghachiri n'ezinaụlọ ha n'udo. Anyị ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ na nke ahụ.
AJỤJỤ: Daalụ, Ned. Otu onye ọzọ na nsogbu Russia-Ukrainian. Ọchịchị Biden ghọtara ma ọ bụ kweta na mbuso agha ma ọ bụ mbuso agha Russia megide Ukraine nwere ike ịkpalite mmetụta dominos n'ọtụtụ okwu? Aga m akpọ aha ụfọdụ: China megide Taiwan; Iran na ndị nnọchi anya ya; Nọt Koria na ogbunigwe ballistic ya megide South Korea na Japan; Venezuela, Cuba, na usoro mmechi ọchịchị ha na mmegharị.
Ya mere Ned, ụwa dum na-ekiri ihe US ga-eme iji kwụsị Russia. Kedu ka ị si ekwu maka nke a?
Ọnụ ego MR: Gịnị bụ akụkụ ikpeazụ? Kedu ka anyị ga-esi?
AJỤJỤ: Kedu ka ị si ekwu maka nke a? Ndị ọchịchị Biden maara etu ụwa niile si ele anya? Dị nnọọ ka ihe mere na Afghanistan, na mgbe ụfọdụ akụkọ na-ekwu na Russia na-ewere a peeji nke ihe mere na Afghanistan na-akpali megide Ukraine - ma ọ bụ nwere ike ịkwaga - ya mere ugbu a ọ bụrụ na ha mere nke ahụ, a niile dominos mmetụta nwere ike ime.
Ọnụ ego MR: Ọ dị mma, tupu m abanye na ajụjụ gị sara mbara, achọrọ m ileba anya n'akụkụ ikpeazụ nke ajụjụ gị, ya bụ Afghanistan.
Ọ na-esiri m ike ịghọta otú ọ na-esi kwụsị njedebe agha afọ 20 ebe United States ji ijeri ijeri dollar na ijeri dollar kwa afọ, ebe ọtụtụ puku ndị agha America - n'otu oge iri puku kwuru iri puku ndị agha America - nọ. guzobe; ebe e nwere nkwa NATO, ebe ọtụtụ puku ndị agha NATO nọ na-anọ ọdụ ruo ọtụtụ afọ, na-egbu ndị na-anwụ anwụ, na-edi ọnwụ nke ndụ na nkwa agha mepere emepe - olee otú anyị si - ka na-adị, otú anyị ga-esi dị. Ọnọdụ ka mma nke ọma iji were ihe anyị na-ahụ ugbu a site na Russian Federation.
Onye isi ala ahụ doro anya mgbe ọ kwupụtara ọkwa ya na anyị ga-akwụsị njedebe agha anyị na Afghanistan, na akụkụ nke ihe mere anyị ji eme ya abụghị nanị iji gbochie ọgbọ ọzọ nke ndị ọrụ America ma ọ bụ ndị ọrụ NATO ịlụ ọgụ. na enwere ike ịnwụ na Afghanistan, mana ka anyị mee ka anyị lekwasị anya na egwu egwu na ohere nke narị afọ 21st. Ya mere, ka anyị na-ebuso agha Russia a, ka anyị na-achọ itinye aka na ụzọ nchebe na mgbochi, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe anyị na-eme.
Yabụ na achọrọ m ikwu okwu banyere Afghanistan.
AJỤJỤ: Ma Ned, echere m na isi ihe bụ nchịkwa (anaudible) tụgharịrị azụ na ndị enyi ya n'ebe ahụ, ọtụtụ ndị mmadụ hụrụ ya dị ka nke a; ikekwe ndị mmekọ na-eche na nke ahụ nwere ike ime ugbu a.
Ọnụ ego MR: Nke mbụ, United States agbachibeghị azụ na Afghanistan. Ị hụla ka anyị na-akpakọrịta ma gosipụta nkwa anyị na-adịgide adịgide nye ndị Afghanistan, anyị emeela nke ahụ n'ụzọ ọ bụla. Achọghị m ịgafe ha ugbu a n'ihi na anyị na-elele nke a mgbe niile.
Ya mere, onye ọ bụla nke na-amụta ihe ọ bụla ọzọ karịa eziokwu ahụ bụ na United States chere na ọ bụ oge ịkwụsị njedebe nke ihe ahụ bụ nkwa agha mepere emepe ebe puku kwuru puku puku ndị agha America lụrụ ọgụ na puku kwuru puku nwụrụ, na otu ihe ahụ. maka NATO nakwa, sapped United States na anyị NATO mmekọ nke ijeri n'elu ijeri - trillions n'ime N'ezie nke 20 afọ; onye ọ bụla nke ga-enweta ihe mmụta ọ bụla site na nke ahụ karịa eziokwu ahụ bụ na United States na-etinye onwe ya iji weghara egwu na ohere ndị anyị na-eche ihu ugbu a, ka anyị na-aga n'ihu na-akwado ma na-akwado ndị Afghanistan, nke ahụ ga-abụ nyocha na-ezighị ezi.
Ma, n'ajụjụ gị, anyị echewo echiche banyere nke ahụ. Ma nke ahụ bụ kpọmkwem ihe mere odeakwụkwọ ahụ ji kwuo okwu na Berlin n'izu gara aga bụ n'ezie na ajụjụ a, iji mee ka ihe anyị na-ahụ na Russia na-agbalị na imegide Ukraine dị mkpa n'onwe ya, n'ezie. Ukraine bụ ezigbo enyi; anyị nwere ezigbo ndị enyi na ndị Ukraine. Ma n'ụzọ ụfọdụ, nke a dị mkpa dị ka Ukraine, ọbụna karịa ajụjụ nke esemokwu, esemokwu nke Russia na-emepụta, n'etiti Russia na Ukraine. Nke a bụ ihe kwesịrị ịbụ iwu a na-apụghị imebi emebi nke a na-akpọ usoro iwu nke dabeere na mba ụwa, ihe kwesịrị ịbụ iwu na-apụghị imebi emebi nke afọ 70 gara aga, kemgbe njedebe nke Agha Ụwa nke Abụọ, chebere ma kwenye n'ezie ọkwa nchebe na-enwetụbeghị ụdị ya. , nke nkwụsi ike, nke ọganihu. Nke ahụ gụnyere na - na Europe, mana ọ na-agụnyekwa na mpaghara nke ọma karịa nke ahụ.
Ma n'ezie, ị na-anụ ka anyị na-ekwu maka usoro iwu nke mba ụwa, ọ bụghị naanị na Europe na ihe Russia na-eme iji mebie ya, ma na mpaghara ndị ọzọ, karịsịa Indo-Pacific, ebe anyị nwere nchegbu yiri nke ahụ banyere ihe. mba ụfọdụ chọkwara ime imebi, imebi usoro iwu nke mba ụwa gbadoro ụkwụ na ya. Ya mere, ọ bụghị na anyị na-efunahụ anyị na ndị Russia na mmetụta nke ihe ha na-eme, dị ka ihe dị mkpa dị ka ha dị maka Ukraine, na-aga nke ọma karịa Ukraine.
AJỤJỤ: Ned, enwere m ajụjụ abụọ na Iran na Kuwait.
AJỤJỤ: Ned, enwere m ike ịjụ -
Ọnụ ego MR: N'ezie, a ga m alaghachikwute gị. kwuru.
AJỤJỤ: Ị kpọrọ m òkù ugboro atọ ma ọ bụ ugboro abụọ.
Ọnụ ego MR: Kwuru, ị jụburu -
AJỤJỤ: Ọ dị mma. Mba, aghọtara m.
Ọnụ ego MR: Ị jụọlarị ajụjụ n'oge nkenke okwu a.
AJỤJỤ: Aghọtara m. Achọrọ m ịgbanwe isiokwu, n'agbanyeghị. Achọrọ m ịjụ gị maka Palestine-American nke nwụrụ na njide Israel na 12th nke Jenụwarị. Ugbu a, amaara m na ị kpọkuru ndị Izrel na ị chọrọ ịhụ ihe bụ ọnọdụ na ihe ndị ọzọ. Nke mbụ, ha zara gị? M pụtara, nke ahụ nwere ike ịbụ onye ọ bụla n'ime ụmụnne m.
Ọnụ ego MR: Ọ dị m nwute, gịnị bụ akụkụ ikpeazụ?
AJỤJỤ: M pụtara, nke ahụ nwere ike ịbụ - echefula. Ana m asị, ha zara gị?
Ọnụ ego MR: Ya mere, anyị ahụbeghị akụkọ ikpeazụ sitere n'aka Gọọmenti Israel. Anyị na-aga n'ihu na-akwado nyocha nke ọma banyere ọnọdụ nke ihe ahụ merenụ. Anyị na-anabata ịnata ozi ndị ọzọ n'aka gọọmentị Israel ozugbo enwere ike. Anyị na-enwe nchegbu miri emi site na akụkọ mgbasa ozi banyere ọnọdụ gbara ọnwụ nke Mr. Assad, nwa amaala America, bụ onye a hụrụ n'ọnwụ mgbe ndị agha Israel nwụchiri ya. Dị ka anyị kwuru na mbụ, anyị na ezinụlọ ya na-akpachi anya ka anyị na-akasi anyị obi, iji nye ọrụ consular. A nọchitere anya anyị n'ụra nke Mr. Assad.
AJỤJỤ: Ọfọn, ọ nwụrụ mgbe a tụrụ ya ịgà, kechie ya na ihe ndị ọzọ. Ma olee ụdị - ka ha - ị na-enye ha oke oge? Ị tụkwasịrị ndị Izrel obi ka ha mee nyocha nke ha n'okwu a?
Ọnụ ego MR: Dịka m kwuru, kwuru, anyị na-anabata ịnata ozi ahụ ozugbo enwere ike.
AJỤJỤ: Ọ dị mma. Enwere m ajụjụ dị ngwa ọzọ. Enwere akụkọ na e nwere ndị nta akụkọ Palestine 17 ndị ejidere taa. Nke ahụ ọ̀ bụ ihe ị ga-akpọlite ​​ndị Izrel ka ha leba anya n’ọnọdụ ọnọdụ a tụrụ ha mkpọrọ?
Ọnụ ego MR: Anyị ma maka akụkọ ndị ị zoro aka na ya. Dị ka anyị na-eme n'ụwa niile, anyị na-akwado ndị nta akụkọ nọọrọ onwe ha na ụlọ ọrụ mgbasa ozi, ị nụkwara ka anyị na-ekwu na mbụ maka enweghị mkpa nke akụkọ ha, ọkachasị n'ebe esemokwu dị elu ma ọ bụ esemokwu nwere ike ịmalite. Anyị kwenyere na nkwanye ùgwù maka ikike ụmụ mmadụ, nnwere onwe ndị bụ isi, na ọha obodo siri ike dị oke mkpa maka ọchịchị dị mkpa na nke na-anabata ya.
AJỤJỤ: N'ikpeazụ, onye nnọchi anya United States na United Nations n'izu gara aga kwuru ma gosipụta ime ihe ike na mmegide ndị ọbịa megide ndị Palestine. Ma, anyị ahụla naanị mmụba na ime ihe ike n'ime ụbọchị ole na ole gara aga. Nke ahụ ọ bụ ihe ị ga-ebuli ma ọ bụ na ị na-arụsi ọrụ ike na okwu dị ka Ukraine na Iran na ihe ndị a niile - m pụtara, n'ụzọ kwere nghọta?
Ọnụ ego MR: Kwuru, anyị bụ nnukwu gọọmentị. Anyị bụ ngalaba buru ibu. Ọ bụghị iji ihe atụ emebigara ihe ókè, mana anyị nwere ike ịga ije na ịta chịngọm n'otu oge. A bịa n'okwu ị welitere, ị nụla ka anyị na-ekwu maka nke a. Ị zoro aka n'ụfọdụ okwu nso nso a. Ngalaba steeti ekwubuola okwu banyere nke a kwa. Anyị kwenyere na ọ dị oke mkpa maka akụkụ niile ka ha zere usoro ndị na-eme ka esemokwu ka njọ na mgbake na-agba mbọ iji kwalite nkwurịta okwu steeti abụọ. Nke a gụnyere ime ihe ike megide ndị nkịtị na ime ihe ike ndị ọbịa.
AJỤJỤ: Ned, enwere m ike ịjụ ihe gbasara Iran (anaghị ege ntị)?
Ọnụ ego MR: Ya mere ajụjụ abụọ Iran. O doro anya.
AJỤJỤ: Ee. Minista mba ofesi Iran na Mọnde kwuru na ha dị njikere ịtụle mkparịta ụka ozugbo ha na United States - ọ bụrụ na ha chere na ha nwere ike nweta ezigbo nkwekọrịta na nkwa. N'ụzọ ọ bụla, enweela nkwurịta okwu na nke a? Ma unu na-eche echiche ka gị na ha kparịta ụka?
Ọnụ ego MR: Humeyra, dịka ị maara, anyị dị njikere izute ozugbo. Anyị anọgidewo na-ejide ọnọdụ na ọ ga-aba uru karị iso Iran na-emekọrịta ihe ozugbo na mkparịta ụka JCPOA na n'okwu ndị ọzọ. Nke a na-agbatị ruo n'ụdị nke akụkụ yana multilateral. Nzukọ ozugbo ga-eme ka nkwurịta okwu na-aga nke ọma karị, nke dị mkpa ngwa ngwa iji nweta nghọta ngwa ngwa na nloghachi nkerịta na nnabata na JCPOA.
Anyị ekwupụtala isi okwu a tupu oge eruo, mana n'ihi nrịgo nke ọganihu nuklia nke Iran, oge na-aga nke ukwuu ruo mgbe uru ndị na-abụghị nke mgbasa ozi JCPOA bufere dị ka e depụtara na mbụ na etinyere ya na - edebere na 2015 ma mejuputa na 2016 na-abawanye site na ọganihu nuklia. nke Iran mere. Ya mere, anyị na-achọ ka anyị na-eduzi diplomacy a ngwa ngwa, na anyị na-anọgide na-edo anya nke ukwuu na inwe ike itinye aka ozugbo ga-emezu ebumnuche ndị ahụ.
AJỤJỤ: Nyere ọnọdụ gị ugbu a na ihe ha kwuru, ànyị ga-atụ anya na nke a ga-eme n'oge na-adịghị anya? Ọ nwere ihe kpatara nke a nwere ike ime n'oge na-adịghị anya? Enweela mkparịta ụka ọ bụla gbasara ime ka nke a mee ngwa ngwa?
Ọnụ ego MR: Ị ga-ajụ ndị isi na Tehran. Anyị – nke a abụghị nke mbụ anyị na-ekwu okwu a. Anyị emeela ihe a mgbe niile ruo ugbu a. Ndị Iran siri ọnwụ na usoro na-apụtaghị ìhè na Vienna. Anyị achọpụtala ogologo oge n'eziokwu na okwu ndị na-apụtaghị ìhè, karịsịa na okwu nke mgbagwoju anya a na nke a dị mkpa, bụ ihe mgbochi. Yabụ na ọnọdụ anyị doro anya. M ga-agwa gị ndị ọchịchị na Iran.
AJỤJỤ: Ihe ikpeazụ m na nke a. Anyị na onye nnọchi anya Pụrụ Iche Malley nwere mkparịta ụka ụnyahụ, onye kwuru na ọ ga-esi ike iche n'echiche na US ga-emekọrịta nkwekọrịta na Iran ọ gwụla ma a tọhapụrụ ndị US eji eji. Achọrọ m ịmanye gị ntakịrị ihe kpatara na nchịkwa adịghị njikere ikwu hoo haa na ha agaghị abanye JCPOA ọ gwụla ma a tọhapụrụ ụmụ amaala America.
Ọnụ ego MR: Ọfọn, ihe onye nnọchi anya Pụrụiche ahụ kwuru bụ na ọ bụ, nhota, “ọ na-esiri anyị ike iche n'echiche ịlaghachi na nkwekọrịta nuklia ebe Iran na-ejide ndị America anọ aka ha dị ọcha.”
Ọnụ ego MR: Nke a bụ isi ihe o kwuworo ugboro ugboro na mbụ, ya mere nke a bụ - ekwesịghị ịbụ akụkọ. Ọ bụkwa m nwere ike ịgwa gị, ọ bụghị ozi nye ndị Iran. Ha anụwokwa ọnọdụ a n'ezoghị ọnụ n'ọnụ anyị na mbụ.
Mana onye nnọchi anya pụrụiche ahụ kwukwara na okwu ndị a na-arụ ọrụ na egwu dị iche iche, na ha na-arụkwa ọrụ na egwu dị iche iche maka otu ihe kpatara ya: Nlaghachi n'otu n'otu na nrube isi na JCPOA bụ nke kacha mma bụ echiche na-ejighị n'aka. Anyị chọrọ ịhụ ndị America ndị a ejidere n'ụzọ megidere ọchịchọ ha kemgbe ọtụtụ afọ, pụọ na ezinụlọ ha, lọta ngwa ngwa o kwere mee. Ọ gaghị emezu ebumnuche anyị, ọ gaghị ejere ọdịmma ha, ijikọ akara aka ha na nkwupụta nke m kwuru na mbụ ejighị n'aka na kacha mma. Yabụ na ọ bụ ya mere o ji agba mmekọrịta anyị na ibe ya, mana ndị a na-arụ ọrụ na egwu dị iche iche.
AJỤJỤ: Enwere m ike ịjụ ajụjụ?
AJỤJỤ: Mana Ned, otu ị siri gwa ya, ọ dị ka ọ dị ka ihe nrịba ama.
Ọnụ ego MR: Ọzọ, ọ bụghị ikpe ahụ na enwere njikọ kpọmkwem ma ọ bụ nke doro anya n'ihi na nlọghachi n'otu n'otu na nrube isi na JCPOA bụ ihe kachasị mma na-ejighị n'aka. Anyị chọrọ nlọghachi nke ndị America a ka ọ bụrụ amụma ụfọdụ, yabụ anyị na-edobe okwu ndị a iche.
AJỤJỤ: Mịnịsta mba ofesi Kuwait gara Beirut na Satọde wee nyefee amụma na-ewuli ntụkwasị obi na Lebanon na ozi jikọtara ya na steeti Gulf, ọ na-eleta Washington n'izu a. Ị maara atụmatụ ndị a? Ma enwere njikọ dị n'etiti nleta ya na Beirut na Washington?
Ọnụ ego MR: Ọ dị mma, a na m atụ anya mgbe odeakwụkwọ na-ezute onye otu Kuwaiti na Wednesde na ha ga-enwe ohere iji kparịta Lebanọn. Ọ bụ ihe United States, yana ndị mmekọ anyị - gụnyere ndị mmekọ anyị na Gulf, French, na ndị ọzọ - anyị lekwasịrị anya nke ukwuu. Ya mere, echere m na anyị ga-enwekwu ihe anyị ga-ekwu na nzụkọ nke abụọ gachara na Wednesde.
AJỤJỤ: (Anaghị ekwu okwu) maka onye ọrụ ibe anyị Tracy Wilkinson na Honduras. Ndị otu na-asọ mpi na nzuko ya nwere ike mebie nraranye nke onye isi ala ọhụrụ nke Thursday, onye Ngalaba Ọchịchị na-anabata ngwa ngwa. Osote onye isi ala Harris ka akwadoro ime njem maka nnabata ahụ. US ọ na-eme ihe ọ bụla iji kwụsị nsogbu ahụ?
Ọnụ ego MR: Ọfọn, ihe m ga-ekwu bụ na nhọpụta nke onye ndu nwa oge ọhụrụ na Honduran National Congress bụ mkpebi siri ike nke Honduras. Anyị na-atụ anya ime ka ọrụ anyị dị omimi yana ọchịchị Castro na-abata na ndị Honduras sitere n'ofe ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche iji kwalite ọdịmma anyị. Anyị na-akpọ ndị na-eme ndọrọndọrọ ọchịchị ka ha nọrọ jụụ, na-akparịta ụka, ka ha zere ime ihe ike na okwu mkpasu iwe, anyị na-agbakwa ndị na-akwado ha ka ha kwupụta onwe ha n'udo ma na-asọpụrụ iwu.
Dịka ị maara, osote onye isi ala Harris enweelarị ohere iso Onye-isi-nduzi-ahọpụtara Castro kelee ya maka mmeri akụkọ ihe mere eme dịka nwanyị mbụ onye isi oche Honduras. Na mkparịta ụka ahụ n'ọnwa gara aga, ha kwurịtara mmasị ha na-ekere òkè na-arụkọ ọrụ ọnụ iji dozie isi ihe kpatara ịkwaga mba ọzọ, iji kwalite ohere akụ na ụba gụnyere ndị Honduras, imeziwanye - ịlụso nrụrụ aka ọgụ, iji belata ihe egwu nchebe, na imeziwanye ohere ịnweta ahụike. na agụmakwụkwọ.
AJỤJỤ: Otu na Turkey maka onye ọrụ ibe m VOA.
Ọnụ ego MR: O doro anya. Ị nwere - enwere nsonye, ​​Conor?
AJỤJỤ: Mba, ajụjụ ya ọzọ, yabụ gawa n'ihu, Barbara.
AJỤJỤ: Ya mere, ọ bụrụ na ị na-echeghị, na - m VOA ibe na-eche ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla mmeghachi omume si State Department na abụọ ikpe banyere mmachi na free okwu na Turkey. Otu bụ Satọde ikpeazụ: a tụrụ onye nta akụkọ Turkish a ma ama maka ịkparị President Erdogan. Taa ụlọ ọrụ steeti - steeti ahụ akwụla ọwa TV nke ọ na-arụ ọrụ nra. Ikpe nke abụọ bụ onye na-egwu egwu a ma ama bụ onye na-eyi egwu site na Islamists na ndị otu mba maka ihe o dere n'oge gara aga, na President Erdogan yiri egwu imechi ya n'oge ekpere Friday, na-ekwu, sị, "Ọ bụ ọrụ anyị igbupụ asụsụ ndị ahụ," enweghị nkọwa.
Ị nwere mmeghachi omume ọ bụla na ikpe ndị a?
Ọnụ ego MR: Ọfọn, nke a na-emetụta na Turkey ma ọ bụ eluigwe na ala na ngwa ya, na nke ahụ bụ eziokwu na anyị kwenyere nnwere onwe ikwu okwu na-ewusi ọchịchị onye kwuo uche ya na ọ dị mkpa ka e chebe ya ọbụna mgbe ọ na-agụnye okwu ụfọdụ nwere ike ịhụ esemokwu ma ọ bụ ụfọdụ nwere ike ịhụ ahụ iru ala. Anyị maara na nlebara anya na-ewute anyị na ijide Sedef Kabaş, otu n'ime okwu ndị ị zoro aka na ya, ụkpụrụ ndị ahụ na-emetụtakwa Turkey dịka ha na-eme obodo ọ bụla.
AJỤJỤ: Burkina Faso. Ndị agha ewerela na TV kwupụta na ha nọ n'ọchịchị. Onye isi ala gọnarịrị nke ahụ, mana ahụbeghị onye isi ala. Ị ma ihe na-emenụ? Enwere mgbaghara? Ị malitela nyocha ma ọ dị ma ọ bụ na ọ nweghị?
Ọnụ ego MR: Ọfọn, anyị ma akụkọ na-ekwu na ndị agha obodo nwụchiri onye isi ala Burkina Faso. Ndị otu ụlọ ọrụ ndị nnọchianya anyị dị na Ouagadougou na-eleba anya na ọnọdụ a ma na-edobe nkwurịta okwu n'etiti ndị mmekọ mba ụwa yana ndị ọrụ gọọmentị President Kaboré. Anyị na-akpọ ka a tọhapụrụ Onye isi ala Kaboré na ndị ọrụ gọọmentị ndị ọzọ ozugbo, yana ka ndị otu nchekwa kwanyere iwu Burkina Faso ugwu na ndị isi ndị nkịtị. Anyị na-agba ndị niile nọ n'ọnọdụ mmiri a ume ka ha nọrọ jụụ na ịchọ mkparịta ụka dịka ụzọ isi dozie mkpesa. Anyị - ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ anyị dị na Ouagadougou dụrụ ụmụ amaala US nọ na Burkina Faso ọdụ na ndị ọchịchị obodo etinyere iwu ịlọta na-adụ ọdụ ka ụmụ amaala US nọrọ n'ụlọ, zere nnukwu igwe mmadụ, na ileba anya na mgbasa ozi mpaghara maka mmelite.
AJỤJỤ: US na-enye Burkina Faso nnukwu ego enyemaka. Ị na-eme nyocha ọchịchị?
Ọnụ ego MR: Yabụ na nke a bụ ọnọdụ na-agbanwe agbanwe. Ọ bụ ọnọdụ na-adịgide adịgide. Ọ gara n'ihu na-etolite ọbụna n'ime awa ndị na-adịbeghị anya, n'ihi ya, ọ na-adịghị anya iji mara, ma ọ dịkarịa ala maka anyị, ọdịdị nke mmepe na-aga n'ihu. Anyị akpọọla ka ndị niile na-eme ihe nkiri kwụsị ka anyị na-eleba anya nke ọma na ihe omume na ala maka mmetụta ọ bụla nwere ike ime na enyemaka anyị.
AJỤJỤ: Iran, nsonye ngwa ngwa. AFP kwuputara nke ahụ - sitere na ndị isi America dị elu na-ekwu na ha ga-achọ ka ha na Iran nwee mkparịta ụka ozugbo. Ị nwere ike ịkwado nke ahụ? Ị chọrọ ka gị na Iran kparịta ụka -
Ọnụ ego MR: Echere m na anyị na Humeyra kparịtara nke a naanị nkeji ise.
Ọnụ ego MR: Ee. Anyị na-eme.
AJỤJỤ: Ọ ga-abụrịrị na agbaghara m ya. Ọ dị mma, ndo.
Ọnụ ego MR: Ee. Ee.
AJỤJỤ: Yabụ kedu ihe a na-atụ anya inweta site na mkparịta ụka ozugbo kama ihe na-eme na Vienna ugbu a?
Ọnụ ego MR: Ọ dị mma, anyị nwere mgbanwe dị ogologo na nke a, yabụ m ga-ezo aka gị na nke ahụ.
Ajụjụ di na nwunye ikpeazụ. Ee, biko? Ee?
AJỤJỤ: Enwere mmelite ọ bụla ị nwere ike inye na jailbreak ISIS na mgbago ugwu Syria, ma n'ihe gbasara nkwado nkwado na ọnụ ọgụgụ ndị gbapụrụ agbapụ? Yabụ kedu ihe bụ - gịnị ka ọ na-ekwu gbasara ikike SDF nwere ịchekwa akụrụngwa, ị na-ahụkwa nke a dị ka ọdịda ọgụgụ isi n'akụkụ nke njikọta?
Ọnụ ego MR: Ọ dị mma, dịka ị hụrụ, anyị wepụtara nkwupụta na nke a na ngwụcha izu, anyị katọrọ mwakpo ISIS n'izu gara aga na ụlọ mkpọrọ Hasakah na ugwu ọwụwa anyanwụ Syria, nke anyị ghọtara na ọ bụ mbọ iji tọhapụ ndị agha ISIS ejidere. Anyị na-aja ndị SDF mma maka nzaghachi ngwa ngwa ha na ịnọgide na-etinye aka na ọgụ megide ISIS, na mwakpo a n'uche anyị na-egosipụta mkpa ọ dị na mkpa ọ dị iji nweta ego zuru ụwa ọnụ iji merie atụmatụ ISIS iji meziwanye ma chekwaa njide mmadụ nke ndị agha ISIS, gụnyere site n'ịkwalite nchekwa ụlọnga.
N'ebe anyị nọ na-egosikwa mkpa ọ dị ngwa ngwa maka mba ndị si mba ọzọ ịkwaghachi, megharịa, mweghachi, na ikpe ikpe - ebe ọ dị mma - ndị obodo ha ejidere na ugwu ọwụwa anyanwụ Syria. Anyị na-agbasi mbọ ike na mmeri zuru ụwa ọnụ nke ISIS na-adịgide adịgide, na-arụ ọrụ site na, yana, na site na mmekorita na ndị mmekọ obodo anyị. Mana gafere nke ahụ, maka mmepe atụmatụ na ala, achọrọ m ịkọwa gị na DOD.
AJỤJỤ: N'abalị ụnyaahụ, Ngalaba Ọchịchị kwuru na ọ bụrụ na a wakporo Ukraine, na US agaghị enwe ike ịchụpụ ụmụ amaala ya. M na-eche ma ị nwere ike ịkọwa ihe kpatara ya, ihe kpatara nke ahụ ga-abụ.
Ọnụ ego MR: Ben, nke a bụ - nke a bụ akụkọ ihe mere eme mgbe niile. The – isi ihe anyị na-ana bụ inye mmelite na mmepe yana ịhụ nzikọrịtara na obodo amaala America nkeonwe na obodo ọ bụla, gụnyere mgbe anyị mere ihe dịka ọpụpụ iwu nyere ma ọ bụ ọpụpụ ikike. Amaara m na ahụmahụ na-adịbeghị anya nke Afghanistan nwere ike ịcha echiche nke ụfọdụ ndị nwere banyere nke a, ma Afghanistan, n'ihi na anyị niile maara nke ọma, pụrụ iche. Ọ bụ ihe Gọọmenti United States emebeghị mbụ.
Dịkwa ka ị nụkwara ka anyị na-ekwu n'ihe gbasara Etiopia, Ukraine na mba ndị ọzọ, ụgwọ anyị bụ ka anyị gaa n'ihu na-enye ndị obodo America mmelite ozi, iji nye ha ọrụ, gụnyere mgbazinye ego mweghachi ma ọ bụrụ na ha chọrọ iji nweta onwe ha nke azụmahịa. nhọrọ. Nhọrọ azụmahịa ndị ahụ, n'ezie, ka dị n'ihe banyere Ukraine. Ọ bụ ya mere ndụmọdụ ndụmọdụ abalị ụnyaahụ ji gbaa ndị America ume ka ha tụlee iji onwe ha na nhọrọ azụmahịa ndị ahụ, ụlọ ọrụ nnọchi anya ụlọ ọrụ dị njikere inye aka na mbọ ndị ahụ.
Ekele m niile.
AJỤJỤ: Daalụ, Ned.
Afghanistan Onye nnochite anya Australia Beirut Berlin China Estonia Europe European Commission Geneva Germany Government Iran Ndi Israel Korea Kyiv Lebanon NATO North Korea Paris Russia Russian mbuso agha Ndị Russia Saudi Arabia toro toro Ukraine United Arab Emirates United Nations United States Vienna Vladimir Putin agha White House Yemen
Otu bọọdụ ọhụrụ ahọpụtara maka ndị mmekọ UNWTO
Otu netwọk njem nlegharị anya ụwa ọhụrụ VP maka mmekọrịta gọọmentị
Nyocha Achọ Stacker Crane Market, Isi Akụkụ ...
Ọgwụ nnwale ọhụrụ iji gwọọ tics si Tourette...
Ahịa Ngwa Microbial Direct-Fed – Uto...
Ihe karịrị ọnụ ụlọ nkwari akụ 30,000 na-arụ ọrụ na...
Ngwọta akwadoro maka nlọghachi azụ na mgbagha...
Lithuania nyere onye nnọchi anya Russia iwu ka ọ pụọ
Mịnịsta Bartlett kpọbatara n'ụlọ ezumezu njem njem ụwa nke…
Cracker Barrel na-akpọpụta onye na-asọ mpi Sanwichi ọhụrụ
Ọchịchọ Britain ịkwaga mbata na-abawanye na ụtụ isi na-arị elu na…
Ngwa ọgwụ ọhụrụ maka ọgwụgwọ dị oke njọ nke Migraine
Vista nwetara ikpo okwu ọrụ ụgbọ elu nkeonwe...
WTN: Onye isi ụgbọ elu Ethiopian Airlines Propelled African Aviation…
St. Thomas Carnival lọghachiri n'onwe ya maka akụkọ ihe mere eme...
Ahịa Njem Arab mepere emepe
Nhọrọ ọgwụgwọ na-abụghị nke ịwa ahụ ugbu a maka akpụkpọ anụ ahụ nkịtị ...
Njem nlegharị anya dị oke egwu: Ozi Italian na ime mmụọ…
Taco Bell ewebata Brunch ọhụrụ na Dọrọ
Magnuson Hotels aha ọhụrụ COO
Ọdịmma ụdị dị iche iche nke Autism nwere ike ịmalite na nwata
Ndị njem ụgbọ elu Sue Alaska Airlines na Union...
Kedu obodo nwetagoro ihe kacha mma na COVID?
Enwere ike ime njem nlegharị anya India na arụmọrụ: Ntụle ọhụrụ
Gluten na-enweghị shuga na-enweghị shuga: Ka ha rie achicha!
Ntụziaka Njem: Ntụpọ Omenala nwere ihe nka
Ụgbọ elu ụgbọ elu azụmahịa ọhụrụ na Madagascar
Nleba anya na amụma ahịa nke ọkụ eletrik...
Ọnụ ahịa Soya na-abụghị GMO, Kekọrịta, maapụ okporo ụzọ n'ọdịnihu...
Ebee ka ndị Saudis ga-eme njem kacha?
Indonesia etinyela usoro ahụike siri ike maka G20 ọhụrụ…